Dhageyso:- Madaxda Galmudug oo sheegay inay la heshiiyeen Xaaf | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso:- Madaxda Galmudug oo sheegay inay la heshiiyeen Xaaf
Dhageyso:- Madaxda Galmudug oo sheegay inay la heshiiyeen Xaaf
Madaxweyne kuxigeenka Dowlad Goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa sheegay in tan iyo markii la doortey ay ku jireen sidii xal loogu heli lahaa dadka diidan doorashadii a dhacdey magaalada Dhuusamareb oo kala ahaa Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo hoggaanka Ahlusunna.
Waxaa uu sheegay in arrinta la xiriirta diidmadii ka timid hoggaanka Ahlusunna ay dhowr jeer ay fashilmeen wada hadallo ay ku doonayeen in xal lagu gaaro walow ugu dambeyn dagaal dhe-marey Ciidanka Dowladda & Ahlusunna ay sababtay in hoggaanka Ahlusunna ay sheegaan inay tanaasuleen.
Madaxweyne kuxigeenka Dowlad Goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid oo la hadlay Idaacadda Voa-da waxaa uu sheegay in wada-hadalo ay la yeesheen Madaweynihii Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf lagu dhameeyey khilaafkii kala dhaxeeyey.
Waxaa uu sheegay in dhamaan la xaliyey tabashadii uu qabey Xaaf,sidoo kale dhawaan sirasmi ah loo shaacin doono heshiiska Madaxda Galmudug & Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Marka laga soo tago hadalkaan kasoo yeeray Madaxweyne kuxigeenka Galmudug ee ah inay ka heshiiyeen Xaaf majiro weli wax war ah oo dhankiisa kasoo baxay Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Previous articleXildhibaano Somali-Kenya ah oo Muqdisho yimid & Dowladda Kenya oo ka war heshay qorshaha
Next article(Wasiir Cawad) Waxba kalama socon cidna iguma wargelin imaatinka xildhibaanada Kenya